यसकारण तिमीहरूलाई नेतृत्वमा अस्वीकार गर्छु… « dainiki
१ माघ २०७८, शनिबार १३:०८
मलाई सानो झुन्डमा रमाउने भन्नुस्, सानो चित्तकै भन्नुस्, गुटियार भन्नुस् सबै स्वीकार्य छ तर, गत साल पौष ५ पछि नेकपा (एमाले)पार्टी र तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संगिन आरोपसहित तथानाम गाली गर्नेहरूलाई नेतृत्वमा स्वीकार गर्न सक्दिन ।
हिजो वारी पाखामा डढेलो झोसेर पारी पाखामा बसेर रमिता हेर्नेहरूको असली चरित्र र व्यवहार राम्रोसँग याद छ । अहिले पनि भुलेको छैन् । बस् भुलेको जस्तो मात्र गरिदिएको हो । म/हामी त त्यो डढेलो निभाउदै उम्रिएका पालुवा हौ ! अहिले त्यो पालुवालाई बीचैमा निमोठ्छु भनेर नसोचे हुन्छ ।
आफ्नै घरमा आगो लगाएर त्यही खरानी धसेर उग्र क्रान्तिकारी बनेकाहरूको अवसरवादी चरित्र नदेखेको हो र ? पदको लागि रातारात “त्यही मान्छे” भगवान/राक्षस बनाउने तिम्रो दोगला चरित्र नजानेको हो र ?
म त आस्था र निष्ठाको आधारमा, पद भन्दा संगठन ठूलो भनेर लागेको इमान्दार कार्यकर्ता हुँ । पदको लागि विभिन्न ठाउँमा सम्झौता गरेको भए, लागेको भए, अहिले धेरै माथि पुगिसकेको हुन्थे । पदको भोको पहिले पनि थिईन, अहिले पनि छैन् र भोलि पनि हुनेछैन।
संगठन चलायमान त भयो नि ! तिमीहरूलाई मज्जले चिन्न पाईयो । “पाए अन्त नपाए गोपालेको जन्त” भनेझैँ, पद पाएसम्म एमाले नै ठीक, एमालेमा पद नपाएको भोलिपल्टै कुनै डम्पिङ साईट पार्टीमा गएर सारा गलत देखाउछौ ? ल एमाले बेठिक थियो भने, पद पाउदा पनि बेठिक थियो होलानि त ! पद नपाउने बित्तिकै कसरी बेठिक भयो । यो कुराको सविस्तार जानकारी दिने हिम्मत तिमीहरूसँग छ ?
छातीमा हात राखेर भन्न र घोषणा गर्न सक्छु, कुनै पनि पद विना पार्टी/संगठनमा ३/५ वर्ष योगदान गर्न सक्छु, संगठनको काममा लाग्न सक्छु भनेर ? सक्दैनौं ! किन भने पद नपाएर नै पार्टी र संगठन छोड्ने ३/४ दशक भन्दा बढी समय दिएको पार्टी पुरै खराब भन्छौ । त्यो खराब बनाउन त तिम्रो पनि केही न केही योगदान थियो होलानी त !
अहिले सहमतिका नाममा देशैभर जे भैरहेको छ त्यो पनि गलत छ । जनताको बहुदलीय जनवाद आत्मसात गर्ने र पार्टी अफ्ठेरोमा पर्दा दिलोज्यान दिएर हिडेँका नेता कार्यकर्ता सहमतिमा नाममा कत्लेआम हुने काम जायज होइन । चुनाव नजिक आउँदैछ भन्ने नाममा जे भैरहेको त्यसले थप पार्टीलाई घाटा हुने देखिन्छ । यसर्थ प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हाँसिल गर्नदिनु नै आजका लागि पार्टी र संगठनका लागि हितकर हुनेछ ।
(अनेरास्ववियूका पूर्व केन्द्रीय सदस्य देउजा नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकको पूर्व जिल्ला कमिटी सदस्य हुन ।)
प्रकाशित मिति: १ माघ २०७८, शनिबार १३:०८